ဘက်ထရီများသည် Galaxy Note7ပေါက်ကွဲမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း Samsung ကအတည်ပြုခဲ့သည် Androidsis
ဘက်ထရီများသည် Galaxy Note7ပေါက်ကွဲမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း Samsung ကအတည်ပြုခဲ့သည်
ပြီးသားအဖြစ် ကြော်ငြာ လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Galaxy Note7ထုတ်ကုန်များ၏ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုအများပြည်သူနှင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်ဈေးကွက်မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုလုံးဝအဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။
ပထမဆုံးပေါက်ကွဲမှုများနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုများစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် Samsung Galaxy Note7၏သက်တမ်းသည်အလွန်တိုတောင်းလှသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအစီရင်ခံစာများနှင့်ကောလာဟလများကဘက်ထရီသည်ပြproblemနာ၏ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ယုတ္တိရှိသောမူလအစဖြစ်သည်ဟုထောက်ပြသော်လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော်ယနေ့ Samsung က Galaxy Note7၏ပြtheနာများသည်၎င်း၏ဘက်ထရီများနှင့်ဆက်နွှယ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်အထူးသဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆဲလ်များနှင့်ဘက်ထရီ၏အနှုတ်လက္ခဏာဆဲလ်များအကြားအဆက်အသွယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 Galaxy Note 7: ion မေးခွန်း
Galaxy Note 7: ion မေးခွန်း
နောက်ဆုံးတွင်ကောလဟာလများနှင့်ထင်မြင်ချက်အမြောက်အများပြီးနောက်နှင့်လပေါင်းများစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် Samsung ကုမ္ပဏီကယင်းကိုအတည်ပြုသည့်ရလဒ်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Galaxy Note7ရဲ့ပြproblemနာကသူ့ရဲ့ဘက်ထရီထဲမှာပါငါတို့ရှိသမျှသည်စိတ်ကူးယဉ်ကြသည်, သို့သော်ယခုယခုတရားဝင်အတည်ပြုချက်နှင့်ဒီကိစ္စကိုအနည်းငယ်ပိုမိုအလင်းဖြာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။
လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည်အပြုသဘောဆောင်သောဆဲလ်များနှင့်သီးခြားခွဲခြားထားသည့်အနှုတ်လက္ခဏာဆဲလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အဆက်အသွယ်မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုသော်ငြားပထမ ဦး ဆုံးသောလှိုင်းနှင့်ပြန်လည်အစားထိုးလှိုင်းလုံးနှစ်ခုလုံးမှ Galaxy Note7ဖုန်းများအတွင်း၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာအတိအကျဖြစ်သည်။
အားသွင်းနေတုန်း Samsung Galaxy Note7ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမီးကြောင့်ဒီ Jeep ဟာမီးလောင်သွားသည်
Samsung ရဲ့သုတေသနပြုချက်အရ Galaxy Note7ရဲ့အစောပိုင်းဘက်ထရီတွေဟာလက်ယာဘက်ထောင့်မှာလင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဘက်ထရီအမှုကအရမ်းသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်.
ဒုတိယစမတ်ဖုန်းများတွင်ဖုန်း၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိပြproblemsနာများရှိသည်။ အခြားထောက်ပံ့သူများကထုတ်လုပ်သောဤဘက်ထရီများတွင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ချို့ယွင်းချက်များရှိသည် လျှပ်စစ်တိပ်ခွေများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသောဂဟေဆော်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဘက်ထရီများကိုတိုတောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးပေါက်ကွဲစေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ဤဂဟေဆော်သောချောင်းများသည်ဘက်ထရီအတွင်းအလွန်အကျွံဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆဲလ်များကိုလောင်ကျွမ်းစေခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းအမှားအယွင်းများကိုပြန်လည်ပျိုးထောင်နိုင်ရန်အတွက် Samsung သည်အလိုလျောက် upload လုပ်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဌာနတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်း၏အမြန်အားသွင်းခြင်း၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း (သို့) Iris စကင်နာသည်ပြofနာ၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်သက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Samsung သည် Galaxy Note 96 ဖုန်းအားလုံး၏ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အခွင့်အရေးယူခဲ့သည် ပြန်ရောက်ပြီမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများအားလုံးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သူတို့၏အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာမီအနာဂတ်တွင် Samsung သည်၎င်းသို့မဟုတ်အလားတူအခြေအနေမျိုးကိုထပ်မံမဖြစ်စေရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုခဲ့သည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်, တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် ၈ မှတ်ဘက်ထရီဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဤအချက်များကိုစက်ရုံများမကျင်းပမီကြာရှည်ခံမှုနှင့်စက်ရုံအများစုတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းမှစက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ "X-Ray" အထိအကုန်အကျခံနိုင်သည်။
ဤစမ်းသပ်မှုအားလုံးသည်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လွှင့်သည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်ချက်ချင်းစတင်လိမ့်မည်။ Samsung ၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုအရ၊ ဤအရှစ်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများအသီးအသီးနှင့်အသီးအသီးမတိုင်မီဆန်းစစ်ခဲ့လျှင် Galaxy Note7ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဘက်ထရီနှစ်မျိုးလုံးတွင်တွေ့ရသောချို့ယွင်းချက်များကိုမည်သူ့ကိုမျှမခြိမ်းခြောက်မီတွေ့ရှိခဲ့သည်.
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်နှင့်အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုကုမ္ပဏီကရှင်းပြသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဘက်ထရီများသည် Galaxy Note7ပေါက်ကွဲမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း Samsung ကအတည်ပြုခဲ့သည်
Jose Manuel Paredes placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ကဲ့၊ တကယ်? ကျနော်တို့အံ့သြစရာပဲ, မသိခဲ့ပါ! ?
Jose Manuel Paredes ကိုပြန်ပြောပါ
၁၈.၄ လက်မအရွယ်ရှိ Android Nougat Android Tablet သည် GFXBench တွင်ပေါ်လာသည်
Gboard ရှိ Animated GIFs နှင့် Emojis များကိုဘယ်လိုမျှဝေနည်း